Nepali Rajneeti | वैंज्ञानिकले पत्ता लगाए यौ’न ‘सम्प’र्क गर्ने उत्तम समय ! यस्तो छ यौ’न स’म्पर्क गर्ने शुभ समय ?
असार २५, २०७८ शुक्रबार ४४४ पटक हेरिएको
यौ’न स’म्प’र्क कुन समयमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? यो सामान्य प्रश्न हो यसको उत्तर पनि मानिसहरुले अत्ति सरल रुपमा दिन्छन ।
जब चाहाना हुन्छ तब दुबैजनाको सहमतिमा सम्बन्ध राख्नुपर्दछ ।
यो कुरा पनि ठिक छ तर बिहान ‘यौ’न सम्बन्ध राख्नाले स्वास्थमा निकै नै फाइदा पुग्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
हेल्थ एन्ड फिटनेस कम्पनी फोर्जा सप्लीमेन्टको एक अध्ययनले विहानको समयमा ‘यौ\_न सम्बन्ध राख्नाले तनाव कम हुने र दिनको सुरुवात पनि राम्रो हुने देखाएको छ ।
बिशेषगरी बिहान साढे सात बजेको समय यौ’न’को लागि बेष्ट हुँने अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनमा सहभागि मानिसहरुले बिहानको समय ‘यौ’न सम्बन्ध राख्नाले पुरै दिन मुड फ्रेश रहने बताए ।
यसको एक लोजिकल कारण भनेको बिहानको समयमा पुरुषको टेस्टोस्टेरोन लेभेल निकै उच्च रहन्छ ।
जसले गर्दा उक्त समय ‘यौ’न सम्बन्ध राख्दा निकै जोशिलो र धेरै समय टिक्ने हुन्छ ।
फोर्जा सप्लीमेन्ट रिसर्चमा मानिसको सर्केडियन रिदम (स्लीपरवेक साइकिल र उक्त समयको तपाईँको गतिविधि) लाई अवलोकन गर्न चाहन्थे ।
उनले १ हजार मानिसलाई समावेश गराएर यो अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनकर्ताले अध्ययनमा सहभागिलाई आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप जस्तैः व्यायाम, घरको काम, अफिसको काम र से’क्स’को बेला राम्रो प्रदर्शन गर्ने गर्छन् ती सबैलाई ध्यान दिन भनेका थिए ।